Guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo u sheegay Puntland, Galmudug iyo Jubbaland in ay dib u eegis ku sameeyaan liiska musharixiinta u tartamaya aqalka sare si loo waafajiyo qoondada haweenka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGuddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo u sheegay Puntland, Galmudug iyo Jubbaland in ay dib u eegis ku sameeyaan liiska musharixiinta u tartamaya aqalka sare si loo waafajiyo qoondada haweenka
October 10, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. [Sawirka: Puntland Mirror]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa dib ugu celiyay maamulada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland xubnaha u tartamaya aqalka sare ee dowlada federaalka Soomaaliya, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay guddiga.
“Sida aad ka warqabtaan haayadaha fulinta ee dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland waxay 8-da bisha Oktoobar soo magacaabeen musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka ee 2016-ka iyadoo liiska ay soo gudbiyeen laysla tartansiiyay rag iyo dumar taas oo aan waafaqsanayn hanaanka doorasho oo ay madasha hoggaanka qaranka (MHQ) dajisay,” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Magacaabistaasi waxa ay u baahantahay in la waafajiyo war-murtiyeedkii MHQ ee September 6-14 qodobkiisa 5.5 oo qeexaya sidaan soo socota ‘qoondada aqalka sare ee haweenka, madashu waxay isku raacday in dowlad goboleed kasta ay xaqiijiso 30% kuraasta aqalka sare ay gabdho kaliyana u tartamaan’, “ ayaa lagu daray bayaanka kasoo baxay Guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya.
Guddiga ayaa bayaanka ku sheegay in dowlad goboleedyada ay dib u eegis ku sameeyaan muddo labo maalmood gudahood liiska musharixiinta u tartamaya aqalka sare ayna soo waafajiyaan war-murtiyeedkii MHQ ee September 6-14.
April 23, 2018 Wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo sheegay in dalku uu ku guuleysanayo kalsoonida haayadaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyo cafiska deynta
February 19, 2017 Ugu yaraan 30 qof oo gudaha gobolka Bakool ugu geeriyooday abaar darteed